RAKOTOAMBOA JEAN LOUIS : Tsy maintsy mandresy isika – MyDago.com aime Madagascar
Tadidio tsara hoy ny Cst Rakotoamboa Jean Louis teny amin’ny Magro Behoririka fa raha nilatsaka Ramatoa Lalao Ravalomanana dia tsy nampoizin’ny frantsay velively ary dia nilomay izy.Niantso an-dRajoelina izy hoe milatsaha dia mody helohina ianareo mba anesorana an’I Lalao Ravalomanana tsy ho kandidà satria raha nanao sondage izy dia 62% dia lasa Lalao Ravalomanana. Izay io sinema io . Jereo tsara ny teny Ivato hoy Rakotoamboa fa raha ny lalàna dia manao fampihavanana no nanomanana ny FFM. Raha hendry izy ireo dia manao ny asany ka anisan’izany fampodiana ny filoha Ravalomanana, hihaona amin’ny Ratsiraka, Zafy izany no asa tokony ataony fa tsy milingiligy amin’ny kandidàn’olona. Torak’izany ny CSC raha ny lalàna no jerena dia manao ny fanarahamaso ny tondrozotra. Raha hendry izy ireo dia tereo ny sasany hanatanteraka marina ny andininy faha 16,17,18,20 ao amin’ny tondrozotra fa tsy any amin’ny kandidà no isolantsolana. Ireny rehetra ireny hoy ity mpanao politika ity dia manao adimborontsiloza ry zareo. Mody miady nefa kandidà iray no esorina. Na izany aza mila mailo isika. Ny fiarovan’ny frantsay ny tombontsoany hoy izy dia ny ampiadiana ny samy Malagasy. Ireny asa nataon-dRajoelina ireny dia tafiditra ao anatin’ny tetikady frantsay. Na ho vy na ho vato hoy Rakotoamboa dia tsy hanaiky lembenena isika fa tsy maintsy mandresy ary tsy maintsy hiverina eto ny filoha Ravalomanana Marc.
13 réflexions sur « RAKOTOAMBOA JEAN LOUIS : Tsy maintsy mandresy isika »
7 juin 2013 à 18 h 02 min
Mankasitraka Tompoko ô!!!izany ka lehilahy mijoro hatra@ farany!!
Mijoro @ heviny ary tsy laitra hozongozonina,maroamaroa ny toa anao Rakotoamboa.
Misaotra koa @ fanazavana ny marina fa efa jamba ny ankamaroan’ny olona , ao ny jamban’ ny vola ao koa
anefa y jamban’ny adim-piainana.Tsara ary mety mihintsy ny fanazavana zavtra toy itoy mba ho fantatry ny rehetra
ny tena fositra @’izao fahavoazana izao.
Tsy handihy tsy hafa-tavony ; tokony miala kanefa i domelina kandidà mbola ao an-dàpa, fa tsy any Andapa akory !
Rahoviana izany ilay tena fandresena ? Izahay efa maika hanao fety miaraka amin’i ranavalona ê !
Tahaky ny mbola ho ela izy ity lesy!!!efa hipipika daholo ny volo vao hiaona angamba
raha izao no mitohy an!!!!
Domelina izany efa maty fa matoatoa sisa mandeha2 iny e!!aza asiana sira intsony iny .
Izy efa tsy ssatra ny miady lavaka hisitriany???
Ravalomanana naetriny ity mipoitra tsikelikely fa izy miha difotra , NY MARANITRA IHANY NO MITSATOKA
@ TANY satria maranitra @ RATSY, tsisy fandiniana kely akory fa tssssssss. MAHONENA!!!
8 juin 2013 à 4 h 33 min
MARINA DAHOLO IZAY VOALAZANAREO EO AMBONY IREO!
Rahoviana no ho tonga aty @ fonenanay Ingahy hajaina avy ao @ TEZA ô?
(tsy afa-miserana fa somary be andraikitra isaky ny manomboka ny volana mandra-paha quinzaine)
Araky ny voalazanareo, dia miandry: tonga dia lasa raha vao misy NDAO
ohatra: miala any i dada, raikitra ny propagande ho an’i neny,
sy ny Hetsika misy fiarovana anti-balles HAT, …
Hitako tao amin’ny site TIM MADA.Tsy te hanary ny Malagasy ry zareo Alemà.
Nilaza ny masoivohon’I Alemana fa hanasazy mitokana ireo tompon’andraikitra na olona ambony sasantsasany izay hita fa sakana amin’ny fivahan’ny krizy ka manao takalon’aina ny vahoaka Malagasy maro an’isa. Mihevitra ny mpanara- baovao fa ankoatra ny filohan’ny tetezamita izay manao kilalaon-jaza ny raharaham-pirenena dia ho isan’ireo ho voasazy ihany koa ireo tandapa akaiky azy. Anarana vitsivitsy no efa voatonona. Voalohany ny an’I Norbert Lala Ratsirahonana mpanolo-tsainan-dRajoelina ary tsy mitsahatra miezaka mitondra fanazavana diso araky ny lalàna ny zava- misy ankehitriny ao anatin’izao “fitondrana mampihomehy” araka ny filazan’ny Amiraly Ratsiraka azy izao. Tsy afa- bela ihany koa ny jeneraly Ranto Rabarisoa, filohan’ny komity miaramila ho an’ny Fiarovam-pirenena (CMDN) izay rafitra napetrak’i Andry Rajoelina ka nanomezany seza ireo manamboninahitra ambony eo anivon’ny foloalindahy izay niray petsapetsa taminy tamin’ilay fanonganam-panjakana. Anisan’ny anarana voatonona ihany ko any an’ny jeneraly Dolin Rasolosoa, filohan’ny CST sady kandida filoham-pirenena nefa manakorontana ny daomy politika tamin’ny tsy fametrahany fialana sy ny fisintonany ny maha- kandidà azy. Anisan’ny sakana amin’ny famahana ny krizy eto Madagasikara ny fidiran’ireo manamboninahitra jeneraly sasantsany, efa misotro ronono, lalina amin’ny resaka politika.
Razanakisoa kristina , ilay mamy ravatomanga efa lasa mpanefoefo rain-dahiny noho ny fanodikodinam-bola naton´izy sy rajoelina, Ny minisitry ny fiarovana , ry Organes polisy, ry roindefo, maro ireo mody misitrika ankehitriny fa tsy avelan´ny tantara hiafina , ny zavatra tokony hatao izany izao dia manome ny lisitra ny masoivoho alemá sy amerikana , ary indrindra ireo video atao porofo
Ho ratsy ny fandehan´izy ity sa efa mandamina ny sinema hatao indray i la frantsa .
toa ny Ua no manao tery vay manta hanery sy hanakanana an-Drajoelina sy ny forongony, izao i Mialy sy ny zanany tsy afaka mivoaka manakny frantsa. Izay tany tian-drajoeilna aleha izany izao manakna azy tokoa sa sinema daholo.
fa i grevin´ny Hetra sy douane teo io tokony araraotina sy hamafisina, dia miaraka mirotsaka an-dalamabe hanalana an´ilay rajoelina , raha tsy miala @ toerany io bitro devoly io tsy misy fifidianana milamina sy mangarahara eo.
Io fanemorana ny datin´ny fifidianana io ve tsy planina avy amin´ny miaramila frantsay , misy hanomanana korontana ,ahafahanay manakorotana sy hamono ny Mlagasy indray.
Aza dia mora kivy loatra isika e!Efa miova famindra aty amin’ny mpanara-dalàna ny UA na koa mody nanao sinema ho tampimaso amin’ny reny malala fa ny fo miaraka amintsika foana.Mba miatsaravelatsihy ohatran’i reny malala e!.
Midina an-dalam-be tsara, milaza ve izany fa hifandona amin’ny miaramila? satria izay no andrasan’i TGV mba hiverina indray ny 7 febroary 2009.Fanontaniana ny ahy ary mila valiny.
Tsy kivy fa maha lasa saina ny fehitsiky ny movansa !
Dekre tsy manjary no avoakan’ny potsista dia vitan’ny hoe « tsy nandray anjara izahay » ! Angaha ity raharaha ity vitan’ny fanambaràna lava fotsiny izao ? Toa misy tsy mahazo an’izay tena fandehany akory !
Izao Beatrice A. dia nilaza fa hanontany ny hevitry ny Firenena Mikambana !
Dekre sady tsy miady, no tsy eken’ny vahoaka ary indrindra ny Praiministra tsy nanao sonia an’ilay izy ; dia izay ve no entina mitonantonana any ?
Manao an’izay hampitarazoka ny krizy fotsiny, ary tena miaro an’i domelina mihintsy ity senita tsy mitanila ity !
na ilay zandary Risara Baomba – modely eo @ fiatsarambelatsia aza,
tsy hisalasala tonga handraraka lacry
topazo maso kely itony,
amin’ny tarehin-javatra niseho sy velona mandrak’ankehitriny
ETO MADAGASIKARA nanomboka ny taona 2009
nisian’ny Coup d’Etat!!
Itony indray dia aoka tsy hisy ho gaga.
==> Misy mahafantatra mantsy ny comportement an’ilay Albert CAMILLE VITAL
mpianatra fony nianatra tao amin’ny Lycée Moderne Ampefiloha
(LMA decrété lycée pilote du temps de dada8)
ingahy mihendri-bazaha firantay AVC
anie hono raciste TSY TIA MERINA
[Samedi 08 Juin 2013*16h00->Face à une rumeur sur une éventuelle chasse aux Merina à Tuléar, des parlementaires issus de la province de Tuléar se concertent à Ivato afin de lancer un appel au calme.]
Mazava sy mety tsara mihitsy a ilay fomba fisainana n’a ilay kabary. Izany tokoa ny tolona tokony hatao sy tohizana eny an-kianja. Ny ady @ frantsay no ady voalohany tokony hatrehitsika, dia avy eo vao ny ady @ Fozaorana izay Malagasy ihany ka Any aoriana Any angamba mety ahitana marimaritra iraisana ihany. Raha ohatra ka…..
Ireo izay afaka mampiseho ireo ady @ fahavalo roa,ireo dia tokony tsy hiha atambo mihitsy. Raha misy Any annotant-taratasy, na oron’antsary n’a sary na inona mety nanampy ny tolona dia hihangaviana ny rehetra mba hanao sy hapetraka izany ety @ sera sera ka hifampizarana afaka izay betsaka indrindra azo atao.
Mazava sy mety tsara mihitsy na ilay fomba fisainana na ilay kabary. Izany tokoa ny tolona tokony hatao sy tohizana eny an-kianja. Ny ady @ frantsay no ady voalohany tokony hatrehitsika, dia avy eo vao ny ady @ Fozaorana izay Malagasy ihany ka any aoriana any angamba mety ahitana marimaritra iraisana ihany. Raha ohatra ka…..
Ireo izay afaka mampiseho ireo ady @ fahavalo roa ireo dia tokony tsy hihambahamba mihitsy. Raha misy ny antotan-taratasy, na oron’antsary na sary na inona mety hanampy ny tolona dia hihangaviana ny rehetra mba hanao sy hametraka izany ety @ serasera ka hifampizarana araka izay betsaka indrindra azo atao.
drema dit :
aiza ihany izay paika hanilihan any frantsay e?
Tsipy tady toy ny ataony aleman izao anie ka tokony hararotina aingana e!
indrindra misarotaka ny frantsya fa crise be ary mbola tsy ekeny bekintana ny porofo nentin-drafabius hoe « armes chimiques ».
Efa mazav kley re olona ny azo atony malagasy ho namana ka tairo hihoha ny mitonona ho mpitari-tolona fa tsy hamerimberim-bavaka sy paikan-jaza satria miara-miasa @ domelina !!!????tena misy tsy mazava any ho any izany sa????
Précédent Article précédent : Ihanta Randriamandranto : Ny Ceni-T no afaka mamaritra ny datim-pifidianana
Suivant Article suivant : Tsy ampy fikarakarana ny CSB 2 Ambohimandroso : tonga nizaha ifotony i Neny